महाराष्ट्रमा माओवादी आक्रमणमा ज्यान गुमाउनेको संख्या १६ पुग्यो, विस्फोटको पूर्वसूचना थियो ! - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > विश्व समाचार > महाराष्ट्रमा माओवादी आक्रमणमा ज्यान गुमाउनेको संख्या १६ पुग्यो, विस्फोटको पूर्वसूचना थियो !
महाराष्ट्रमा माओवादी आक्रमणमा ज्यान गुमाउनेको संख्या १६ पुग्यो, विस्फोटको पूर्वसूचना थियो !
May 2, 2019 May 2, 2019 GRISHI417
नयाँदिल्ली । भारतको महाराष्ट्रस्थित गढचिरौलीको कुरखेडा तालुकामा गरिएको माओवादी आक्रमणमा परी ज्यान गुमाउनेको संख्या १६ पुगेको छ । माओवादीले सुरक्षाकर्मी सवार गाडी लक्षित बम विस्फोट गराएका थिए ।
ज्यान गुमाउनेमा १६ जनामा केसी– ६० कमान्डोज् रहेको बीबीसीले जनाएको छ । केसी-६० कमान्डोज् माओवादीको गुरिल्ला रणनीतिलाई असफल पार्न महाराष्ट्र पुलिसले गठन गरेको एक विशेष दल हो । जसमा स्थानीय जनजातीका व्यक्तिहरुको उल्लेख्य सहभागिता छ । सन् १९९२ मा ६० जना स्थानीयलाई समावेश गरेर केसी-६० कमान्डो स्थापना गरिएको थियो । विस्तारै माओवादीको संघर्ष चर्किँदै गएपछि नक्सलाइटकाविरुद्ध आक्रमण गर्न कमान्डोज् पनि बढाइएको थियो ।
बुधबार बिहान करिब ३० देखि ४० गाडीमा आगजनी गरिसकेको क्षेत्रमा गइरहेका सुरक्षाकर्मीलाई लक्षित गरेर उक्त विस्फोट गराइएको थियो । माओवादीले बुधबार बिहानै उक्त क्षेत्रमा ३० देखि ४० गाडीहरुमा आगजनी गरेका थिए ।
अहिले उक्त स्थानमा घेरा हालेर हमलाकारीको खोजी भइरहेको इन्डिया टुडेले जनाएको छ । महाराष्ट्रका डीजीपी सुबोध जैसवालले भनेका छन्, “अन्य कुनै घटना हुन नदिन हामी एकदमै अलर्ट छौं ।”
नक्सलहरुले यसअघि नै निर्वाचनका दौरान विस्फोट गराउने घोषणा गरेका थिए । “हामीसँग विस्फोटको पूर्वसूचना थियो । तर, कुन क्षेत्रमा विस्फोट हुन्छ भन्‍ने यकिन थिएन। त्यही अनुरुप हामीले अप्रेशन अघि बढाएका थियौं । तर, विस्फोट भयो । हामीले विस्फोटको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छौं । विस्फोटमा संलग्नको खोजीकार्य पनि तीव्र पारेका छौं,” डीजीपी जैसवालले भने ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस घटनाको निन्दा गरेका छन् । उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, “महाराष्ट्र गढचिरौलीमा सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाने गरी गराइएको विस्फोट एक घृणादायी आक्रमण हो । यसको म निन्दा गर्दछु । म सबै बहादुर जवानलाई सलाम गर्दछु । उनीहरुको बलिदान बिर्सिने छैनौं । पीडित परीवारजनमा मेरो समवेदना छ । यस हमलाका दोषीलाई कडा कारबाही गरिनेछ ।”
महाराष्ट्रमा गढचिरौली सबैभन्दा बढी माओवादी प्रभावित जिल्ला हो । महाराष्ट्राका मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ” गढचिरौलीमा बुधबार केसी ६० का १६ सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाने गरी गराइएको विस्फोटकव घटनाले दुखी बनाएको छ । यो कायरतापूर्ण घटना हो । मृतकका परीवारजनमा मेरो गहिरो समवेदना ।” उनले आफू गढचिरौलीका डीजीपी तथा एसपीसँग निरन्तर सम्पर्कमा भएको समेत बताएका छन् ।
त्यसैगरी गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले पनि ट्वीट गर्दै गृहमन्त्रालय प्रदेश सरकारको निरन्तर सम्पर्कमा छ । उनले लेखेका छन, “प्रदेशलाई आवश्य हरकिसिमको सहयोग गर्न मन्त्रालय तयारी अवस्थामा छ ।”
एक महिनापछि वुहानमा भेटिए कोरोना संक्रमित
May 10, 2020 GRISHI